Ọkachamara Semalt na-akọwapụta Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Weebụ
EXtractor e webatara iji budata ebe nrụọrụ weebụ niile iji mee ihe n'Ịntanet. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị bara uru ma dị ike. Naanị ị ga-etinye URL ahụ ịchọrọ ibudata data sitere, na weebụsaịtị eXtractor ga-arụ ọrụ ya n'otu ntabi anya, na-enye gị nsonaazụ ziri ezi ma chọọ.
Kwesịrị Ekwesị Maka Ndị Nchọpụta, Ndị Ahịa, na Ndị Nkọwa:
EXtractor weebụsaịtị abụghị nanị maka ụmụ akwụkwọ, ndị ọchụnta ego, ndị na-ere ahịa ahịa, kamakwa maka ndị odeakụkọ, ndị na-eme nchọpụta na ndị nyocha nhata. Enwere oge mgbe ịchọrọ ịnweta ebe nrụọrụ weebụ mgbe ị na-anọghị n'ịntanetị, ma ọ bụ na ịchọrọ ịdebe ndabere gị faịlụ dị mkpa, ma ụlọ ọrụ ịchọrọ ụlọ anaghị enye nhọrọ a. Site na eXtractor e-weebụ, ọ dị mfe igbado faịlụ gị ka enwere ike ibudata ọdịnaya niile na diski ike gị ozugbo. Ndị nchọpụta nwere ike ibudata akwụkwọ, akwụkwọ e-akwụkwọ na data ndị ọzọ na Intanet. N'otu aka ahụ, ndị ahịa ahịa na ndị nta akụkọ nwere ike ibudata data iji mee ka azụmahịa ha ka njọ.
Inweta Ọdịnaya Weebụ dị mfe:
Site na eXtractor weebụ, ị nwere ike ịnweta ngwa weebụ ma nwee ike ịrụ ọrụ ụfọdụ. Ụfọdụ weebụsaịtị na blọọgụ anaghị anọ na ntanetị ruo mgbe ebighị ebi; ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta data ha, ị nwere ike ịnwe iji ndabere faịlụ ma ọ bụ jiri weebụsaịtị eXtractor. Idebe faịlụ nwere ike iwe oge na ike. N'ụzọ dị iche, EXtractor weebụsaịtị ga-eme ka ọrụ gị dị mfe ma nye gị ohere ịbanye na saịtị ahụ niile na-anọghị n'ịntanetị. Ọ pụtara na ị nwere ike ịnweta ọdịnaya nke saịtị ahụ n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla.
Jikọtara na Mbadamba ụrọ, Smartphones na Ngwaọrụ Kọmputa:
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke EXtractor bụ e jikọtara ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile, dịka smartphones, ngwaọrụ kọmputa, na mbadamba. N'ezie, ngwá ọrụ a na-enye gị ohere ịchekwa saịtị ọ bụla na ekwentị mkpanaaka gị ka o wee nwee ike lee ya anya na-anọghị n'ịntanetị. Ihe na-eme ka eXtractor weebụsaịtị dị iche na ngwa yiri nke ọzọ bụ na ọ na-echekwa ibe weebụ niile na ngwaọrụ gị. Ọ pụtara na ị nwere ike ibudata ederede, ihe oyiyi, ọdịyo na faịlụ vidiyo na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Bugharịa Ọdịnaya Na Ngwaọrụ Na-ewepụ:
Site na eXtractor Weebụ, ị nwere ike ọ bụghị naanị ibudata saịtị ahụ ma nwee ike ịkwaga ọdịnaya ya na ngwaọrụ nke nwere ike iwepụ dịka disk disk na CD-ROM.Ngwaọrụ a nwere ike ibudata 100 faịlụ na kọmputa gị na nkeji nkeji. Ọ na-eme ka ibe gị dịrị na ya, na usoro dum na-ewe nkeji oge.
Gbanwee njikọ HTML:
Site na eXtractor, ị nwere ike ịgbanye njikọ HTML na aha mara mma ma nwee ike ịmalite azụmahịa gị. I nwekwara ike idezi njikọ HTML, ma ọ bụ mee mgbanwe ndị ọzọ na ọrụ a zuru ezu. Ozugbo ebudatara saịtị, a ga-echekwa ya na mpaghara gị na diski ike gị ma ọ bụ ebe nchekwa ekwentị. Ị nwekwara ike ịchekwa akụkụ ya na nchekwa data nchekwa eXtractor nke dabeere na gị chọrọ. Anyị nwere ike ịbanye site na ibe weebụ echekwara na ọsọ ọsọ.
EXtractor e-mail na-abịa na njirimara enyi-enyi ma ọ bụ dakọtara na ọ fọrọ nke nta niile sistemụ arụmọrụ na ihe nchọgharị weebụ.Ngwá ọrụ a na-abịa ma na-akwụ ụgwọ n'efu ma kwụọ ụgwọ ma na-achi achi isi-notch na mma nsonaazụ Source .